သရက်ဂူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သရက်ဂူ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 10, 2014 in Creative Writing, Short Story | 20 comments
မိုးကား မစဲ။ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာ​နေသည်​။ လျှပ်​စီးများလည်း မည်းမည်း​မှောင်​​နေ​သော ​ကောင်းကင်​ယံတွင်​ ဝင်းကနဲ လက်​ခနဲ။ မိုး​ရေ​ပေါက်​များ သည်​လည်း သွပ်​မိုးများ ​ပေါက်​သွားမတတ်​ တဝုန်းဝုန်း တဒိုင်းဒိုင်း ရိုက်​ခတ်​​နေ​လေသည်​။ ဤသို့​သော မိုးညမျိုးတွင်​ မည်​သူ အိမ်​အပြင်​ ထွက်​ချင်​ပါမည်​နည်း။
သို့တ​စေ ကိုကြိုး ဆိုသူ လူတစ်​​ယောက်​ အတွက်​မူကား အိမ်​ပြင်​ ထွက်​ရုံသာ မဟုတ်​၊ ၁၅ မိုင်​ခန့်​ ​ဝေးကွာ​သော အိမ်​ဆီသို့ ပြန်​ရ​ပေဦးမည်​။
အိမ်​အပြန်​ လမ်းသည်​လည်း လျှပ်​စစ်​မီးများ ထိန်​ထိန်​ဝင်း​နေ​သော လမ်းမများအား ဖြတ်​သန်းသွားရမည်​ မဟုတ်​။ မည်း​မှောင်​​နေ​သော ​တောလမ်းအား ဖြတ်​သန်းသွားရ​ပေမည်​။
မိုး စဲနိုးစဲနိုးဖြင့်​ ​အ​ဝေး​ပြေး လမ်းမကြီးနံ​ဘေး ဇရပ်​ကြီး​ပေါ်တွင်​ အခြား​သော ရွာသားများနှင့်​ အတူ ​စောင့်​​မျှော်​​နေခဲ့​သော်​လည်း မိုးကား မစဲ၊ ပို၍သာ သည်းလာသည်​။
​ညကား ၉ နာရီအချိန်​သို့ ဆိုက်​​ရောက်​ လာခဲ့ပြီ ဖြစ်​၏။ ည ၆ နာရီ​ကျော်​ခန့်​မှ ရွာသွန်း​နေ​သော မိုးသည်​ သည်း၍ ​ကောင်း​နေဆဲပင်​ ဖြစ်​၏။ ​နောက်​ဆုံး မထူ​တော့ပြီမို့ ကိုကြိုးလည်း အိမ်​ပြန်​ရန်​ ဟန်​ပြင်​ရ​တော့၏။
သာမာန်​ အချိန်​များ၌ ၂နာရီခန့်​သာ ရှိ​သော ဆိုင်​ကယ်​ခရီးလမ်းကား မိုး၏ အရှိန်​​ကြောင့်​ နှစ်​ဆတိုး၍ သွားနိုင်​​ပေသည်​။ သို့ဆိုလျှင်​ နာရီပြန်​ ၁ ချက်​တီးကာမှ အိမ်​သို့ ပြန်​​ရောက်​​ပေလိမ့်​မည်​။ မည်​သို့ဖြစ်​​စေ မိခင်​အတွက်​ ဝယ်​ယူခဲ့​သော ​ဆေးဝါးများ အချိန်​မှီ ​ရောက်​ရန်​ အ​ရေးကြီး၏။
ကိုကြိုး ကဲ့သို့ပင်​ တယ်​ကုန်း ရွာသား ၄ ​ယောက်​မှာလည်း ရွာပြန်​ရန်​ ဟန်​ပြင်​​နေကြ၏။ တယ်​ကုန်းနှင့်​ ကိုကြိုး၏ရွာ ဖြစ်​​သော ညိုမြရွာမှာ အင်း​တောက်​ လမ်းခွဲထိ တစ်​ခရီးတည်း ဖြစ်​​လေသည်​။ အင်း​တောက်​ လမ်းခွဲနှင့်​ ညိုမြရွာကား ၃ မိုင်​ ခရီး ဖြစ်​​လေ၏။
ကိုကြိုးတစ်​​ယောက်​ မိခင်​အတွက်​ ဝယ်​ယူလာ​သော ​ဆေးဝါးများအား ​ရေမစို​စေရန်​ ပလတ်​စတစ်​နှင့်​ အထပ်​ထပ်​ ထုပ်​ပိုးပြီး​နောက်​ ၎င်းကိုယ်​တိုင်​ကမူ စာလာအိတ်​အား ​ခေါင်းစွပ်​သဖွယ်​ ပြုလျှက်​ ဆိုင်​ကယ်​စက်​နိုးကာ အိမ်​အပြန်​ခရီးအား မိုး​မှောင်​အတွင်း စတင်​ တိုးဝင်​လိုက်​၏။
ရွာသား ၄ ​ယောက်​လည်း ကိုကြိုးနှင့်​ မ​ရှေးမ​နှောင်းတွင်​ပင်​ ထွက်​ခွာ လာခဲ့သည်​။ ​ဆိုင်​ကယ်​ ရှေ့မီး၏ အလင်းတန်းအောက်တွင် မိုးရေစက်များကား အဆက်မပြတ် ကျဆင်းနေလျှက်။
ဟိုးရှေးကခင်က ဖုန်တထောင်းထောင်း ထနေခဲ့သော လမ်းသည် လူအများ သွားလာဖန် သွားလေသောအခါ တစ်စထက် တစ်စ မာကျော၍ လာခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ မိုးရေ သွန်းဖြိုးပြန်သောအခါ မူကား မြေမာ လမ်းမှ မြေချော်လမ်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြန်သည်။
စိတ်ရှိတိုင်း ဆိုင်ကယ် လီဗာကို နင်းသွား၍ မရ။ လမ်းချော နေသောကြောင့် သတိကြီးစွာ ထား၍ စီးနင်း နေရလေသည်။ ယင်းသို့ သတိထား၍ စီးနေသည့် ကြားမှပင် တစ်ချက်တစ်ချက် ဘီးချော်သွားတတ်သေး၏။
ဆိုင်ကယ် သုံးစီး အင်းတောက် လမ်းခွဲသို့ အရောက်တွင် ည သန်းခေါင်ချိန် တိုင်ခဲ့လေပြီ ဖြစ်သည်။ အင်းတောက်လမ်းခွဲ တွင် ဆိုင်ကယ်များအား ခတ္ထေခဏ ရပ်နားကာ ဇရပ်ပေါ်၌ တက်ရောက် နားခိုကြလေသည်။
တယ်ကုန်း ရွာသားများမှ ကိုကြိုးအား ၎င်းတို့ ရွာသို့ လိုက်ခဲ့ပါရန် ခေါ်သော်လည်း ကိုကြိုးမှာ မိခင် ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီးကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် ရွာသို့သာ ပြန်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေ့တွင် ၃ မိုင်ခန့်သာ ဝေးတော့ကြောင်း ပြောဆိုလေ၏။
အင်းတောက်လမ်းခွဲနှင့် ညိုမြရွာ အကြားတွင် အင်မတန် ဆိုးသွမ်းလှသည်ဟု လူတို့၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် နာမည်ကြီးလှသော သရက်ဂူ ရှိလေသည်။ သရက်ဂူ ဆိုသည်မှာကား သရက်ပင်ကြီး တစ်ပင်၏ အောက်တွင် တည်ထားသော အုတ်ဂူတစ်လုံး ဖြစ်လေ၏။ ယင်း သရက်ပင်ကြီးသည် လမ်းမ၏ နံဘေးတွင်ပင် ရှိလေသည်။
ယင်းနေရာ အနီးမှ လူသူပြတ်လပ်သော အချိန်များတွင် တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စ ဖြတ်သန်း သွားလာဝံ့သူ ဟူ၍ မရှိလောက်အောင်ပင် အခြောက်အလန့် ကြီးလှသည်ဟု သတင်းထွက်၏။ ယခုကဲ့သို့ ညဉ့်နက် သန်းခေါင် အချိန်တွင်မူ သာမန် လူသားတစ်ယောက် အဖို့ မည်သို့ ဖြတ်သွားဝံ့ပါမည်နည်း။
ယင်းအကြောင်းအား သိသော တယ်ကုန်း ရွာသားများမှ ကိုကြိုးအား ၎င်းတို့ ရွာဆီသို့ လိုက်ပါ၍ အိပ်စက်ပြီး မနက်မိုးသောက်ကျမှ ညိုမြရွာသို့ ပြန်ရန် ပြောနေခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ကိုကြိုးမှာမူ သရဲတစ္ဆေအား ကြောက်လန့်တတ်သူ မဟုတ်သည့်အပြင် ယခုလို အရေးကြီးနေသော အချိန်တွင် မည်သို့သော အတားအဆီးတွင် ရှိနေပါစေ သွားရမည့်လမ်းအား မဖြစ်ဖြစ်အောင် သွားမည့်လူစား ဖြစ်ချေ၏။
နောက်ဆုံးတွင် တယ်ကုန်း ရွာသား လေးယောက်မှာလည်း ကိုကြိုးအား “သတိထား၍ သွားပါ နောင်ကြီး” ဟူ၍သာ သတိပေး၍ ၎င်းတို့ ခရီးအား ဆက်လက် ထွက်ခွာ သွားကြလေသည်။ ကိုကြိုးလည်း အင်းတောက် လမ်းခွဲမှ မိမိ၏ ဇာတိချက်မြေ ညိုမြရွာဆီသို့ ခရီးဆက်ခဲ့လေသည်။ မိုးသည်ကား မစဲသေးချေ။ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေဆဲသာ ဖြစ်ချေ၏။
အဲ သရက်ဂူမှာ သရက်သီးတွေ များဂျီးရှိလားဟမ်?
ဆက်မရေးတော့နဲ့ ကိုယ့်ဟာကို ဖြည့်တွေးကြပါစေ
ဒါမှ မဟုတ် ပြီးပလား…..
အပိုင်း တစ် လို့ မရေးထားလို့ အညာမိပြီး ဖတ်ဖြစ်သွားတာ ..
ဘာမွှ ပြောဒေါ့ဘူးနော် ..
ဟီး .. ဟီး .. ဟီး ..
၃ မိုင်သာဝေးတော့တဲ့ခရီးကျမှ ဘယ်နှစ်ရက်မောင်းအုံးမလို့လဲဟင်
သရဲ ဆိုတာ ကင်မရာနဲ့ရိုက်လို့ ပုံထင်ချင်မှထင်မှာ..
မိုးကား မစဲ။ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာ​နေသည်​။ …နဲ့ … စပြီး..
မိုးသည်ကား မစဲသေးချေ။ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေဆဲသာ ဖြစ်ချေ၏။…ဆိုပြီး.. ဆုံးထားတယ် ။
(ရေးဟန်ကလည်း.. မင်းသိင်္ခကြီးရဲ့ဘိုးအေ ခေတ်က..အရေးအသားကြီး ။ )
နီ..တစ်သိန်းမြန်မြန်ပြည့်အောင်..အရင်က ကျန်ခဲ့တဲ့ အပိုင်းတွေတွေရော..
အံစာ ကြီး မတွေ့တာ အတော်ကြာ…။
နေလို့ မှ ကောင်းရဲ့လား။
အချစ်ရေး ရော အဆင်ပြေရဲ့လား…။
ပို့စ်ကတော့ အခန်းဆက်လည်းမပြောပဲ တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့
ရပ်ထားတယ်လို့ သတင်းရလို့ ဖတ်ကို ဖတ်မကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတာ
သဂျီး + ဦးပါ
ဥဥပါ ပြောတာ ဟုတ်တယ်
သဂျီး မြှောက် မပေးပါနဲ့
ဟိုတစ်ခါလည်း ညဘက်ကြီး ဂူတွေဆီသွားပြီး ဒါ့ပုံ ရိုက်ပြီးပြီ
ဘာမှ ပါမလာဘူး ..
အဲ့ဒါ သရဲ ဆိုတာမျိုးဟာ ဒါ့ပုံထဲ မထင်လို့ဘဲ ဖြစ်မှာ …
ကိုဂျီးရဲ့ အရေးအသားတွေကို မနာလို မဖစ်နဲ့
ညီငေး ရေးတတ်ရင် ဂလို အခန်းဆက်တွေ ရေးလေ … ငိငိငိ
စိုးရိမ်မိတယ် ဆိုဒါဂျီးဒေါ့ နည်းနည်း လန့်တယ် …. ဟီးဟီး
ပို့စ်ထဲ ကွန်မန့်ဝင်ပေးတဲ့လူဒွေ အားလုံးဘဲ ..
ဘေးလိုင်းပေါ်တင်နေလို့ ဖွင့်မိတယ်..ဖွင့်မိတော့လည်း စာရေးသူနာမည်..ဇာတ်လမ်းကြည့်ကတည်းက အဲ့လိုထားခဲ့မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်.. သိပေမယ့်လည်းဖတ်သွားတယ်.. နှစ်ပေါက်နေတဲ့ အဆုံးမသတ်ပိုစ့်တွေကိုလည်း မမေ့သေးဘူးနော့ :p:
အိုက်ဒီပို့စ်တွေကို အဆုံးသတ်တော့မို့ .. ဟီးးး
ဒီမနက်ပဲ အဆုံးမသတ်ရသေးတဲ့ ပို့စ်တွေကို ကူးထားတယ်
အိုက်ဒါ တစ်ခုချင်း အဆုံးသတ်တော့မို့ …
လာပီး အားပေးအုံးနော် မမခွစ် … အဟီးးးး
ယနေ့Post ရဲ့ မူပိုင်ရှင်ရယ်။ တာဝန်လေး ဆက်ယူပါဦးလား။
အဲဂလို တန်းလန်းတွေမို့ ဝင်မဖတ် မမန့်ပဲထား ထားတာ…
ဆုံးအောင်ရေးမှ မန့်တော့မယ်… ဒါဘဲ
အဲ့ဂလိုဂျီးလား ညင် ..
ဒါဆို နောက်ခါ တားတား ဆုံးအောင် ရေးဘာတော့မယ် ညင် …
အို .. အရီးရယ် …
ဒီလကုန်ရင် ယူမှာပေါ့လို့ …
ပြီးဂဲ့တဲ့ လ က …
အချိန်မမှီဒေါ့လို့ မသိခြင်ထောင် ထောင်လိုက်ဒါနော် ..